यस्तो रह्यो प्रधानमन्त्री ओलीको सय दिन, काम भन्दा गफमा बढी केन्द्रीत भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको टिप्पणी ! | Citizen FM 97.5 Mhz
Home > राजनीति > यस्तो रह्यो प्रधानमन्त्री ओलीको सय दिन, काम भन्दा गफमा बढी केन्द्रीत भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको टिप्पणी !
यस्तो रह्यो प्रधानमन्त्री ओलीको सय दिन, काम भन्दा गफमा बढी केन्द्रीत भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको टिप्पणी !
जेठ ११, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिंहदरबार प्रवेश गरेको आज सय दिन पुगेको छ । ‘हनिमुन अवधि’ पूरा गरेको सरकार आगामी बजेटको तयारीमा छ ।
‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा लिएर अघि बढेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना हरेक भाषणमा समृद्धि र विकासका योजना सुनाउन छाड्नुभएको छैन ।
जेठ ७ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि ५ वर्षप्रति नेपालीको आय दोब्बर बनाउने र वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्नेजस्ता महत्वाकांक्षी योजना छन् ।
राजनीतिक स्थायित्वपछि गठन भएको पहिलो सरकार भएकाले अहिलेको सरकारसँग जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन् । सरकारले आफ्नो सय दिनमा केही राम्रा काम गरे पनि अपेक्षा अनुसार गति लिन भने सकेको छैन ।
भाषण र प्रचारका लागि कस्मेटिक काममा रुमल्लिएर सरकारले लिनुपर्ने गति लिन नसकेको विश्लेषणहरु हुन थालेका छन् । सर्वसाधरणबाट सरकारले ठूलो प्रशंसा कमाएको यातायात सिन्डिकेट अन्त्यकै विषयमा हो ।
प्रधानमन्त्रीको अर्काे राम्रो कदम भनेको सरकारी अधिकारीहरुको अनावश्यक वैदेशिक भ्रमणमा नियन्त्रण हो । सरकारले नयाँ ‘कन्सेप्ट’सहित भर्ना अभियान चलायो । अभिभावकत्व ग्रहण गरी विपन्न बाल–बालिकालाई विद्यालयसम्म र्पुयाउने अभियान गाउँ–गाउँसम्म सञ्चालन गरिएको छ ।
यसले राम्रै चर्चा पनि पाएको थियो । नयाँ सरकार बनेपछि विमानस्थलबाट लामो समयदेखि संगठित रुपमा हुँदै आएको सुन तस्करीको सफल अनुसन्धान गरी त्यसमा संलग्नहरु पक्राउ परे ।
सरकारमा आएको सय दिनभित्रै प्रधानमन्त्री ओली आफू पनि भारतको राजकीय भ्रमण जानुभयो र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणमा ल्याउन सफल हुनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी भाषणमा समृद्धिको कुरा गरिरहनुभएको छ । त्यस अनुसारका योजना कार्यान्वायन अघि बढ्न सकेको पाइँदैन ।
प्रधानमन्त्री आफैं पनि योजना कार्यान्वायनमा भन्दा कार्यक्रम र राजनीतिक भेटघाटमै बढी समय बिताउँदै आउनुभएको छ ।
प्रदेश सरकार बनेको ४ महिना पुगिसक्यो । तर, समयमा कानुनहरु नबन्दा न त स्थानीय तहले गति लिन सकेको छ न त प्रदेश सरकारले नै । संघीयता कार्यान्वायन सरकारको प्राथमिकताको विषय हुनुपर्नेमा त्यसमा सरकारले आवश्यकता अनुसार चासो दिन सकेको छैन ।
सरकारले लिएको समृद्धिको योजनालाई कार्यान्वयनको तहमा लैजाने भनेको कर्मचारीतन्त्रले हो । तर, प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीतन्त्रलाई न हात लिन सकेका छन् न त सुधार नै गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ ।
यसैबीच,ओली नेतृत्वको सरकारको एक सय दिने अवधि काममा भन्दा गफमा बढी केन्द्रीत भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले टिप्पणी गरेको छ ।
काँग्रेसकी सचेतक पुष्पा भूषालले भाषण, सपना र आश्वासनमै सरकार केन्द्रीत भएको नेपाली रेडियो नेटवर्कसँग बताउनु भयो । उहाँले राज्यका निकायहरुलाई त्रसित गराउने गतिविधिहरु सत्तारुढ दलका नेताहरुले गरिरहेकाले राज्य संयन्त्र कमजोर बन्न थालेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
प्रहरी कार्यालयको क्यान्टिनमा हवल्दारकै श्रीमती झुण्डिएको अवस्थामा भेटिए
सभामुख महरा भन्छन्-‘बैठकमा सरकारको उपस्थिति समयमै हुनुपर्छ’
आयो मनोमानी शुल्क असुल्ने निजी विद्यालयलाई शिक्षा मन्त्री पोखरेलको कडा निर्देशन
नेकपा बन्यो एसियाकै तेस्रो ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी
प्रदेश नं ३ उपसभामुखमा राधिका तामाङ निर्विरोध निर्वाचित